आईवटरमार्क आईओएस को लागी - वाटरमार्क संरक्षण | बेर आश्चर्यजनक
साझेदार र ग्राहकहरु
आईवटरमार्क आईओएस को लागी - वाटरमार्क संरक्षण
नवीनतम: 8 / 21 / 19
आवाश्यक हुन्छ: आईओएस
iWatermark - तपाईंको डिजिटल फोटो र कलाकृति को रक्षा गर्नुहोस्
आईफोन र आईप्याडका लागि विश्व नं। १ डिजिटल वाटरमार्किंग अनुप्रयोग। स्टाइलिश सेकेन्डमा एक फोटो मा तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार वाटरमार्क। iWatermark फोटोग्राफरहरूको लागि र द्वारा बनाईएको हो। आईट्यून्स अनुप्रयोग स्टोरमा समीक्षा जाँच गर्नुहोस्।
फेसबुकमा साझेदारी गर्नुहोस्
ट्विटरमा साझेदारी गर्नुहोस्
ईमेल मा साझा गर्नुहोस्
लिin्कडइनमा साझेदारी गर्नुहोस्
Pinterest मा साझा गर्नुहोस्
Reddit मा साझा गर्नुहोस्
समीक्षा / ट्यूटोरियलहरू
IWatermark आईओएस को लागी
पेशेवरहरू, व्यवसाय र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि आवश्यक वाटरमार्किंग अनुप्रयोग।
सजिलैसँग आफ्नो फोटो र भिडियोहरू पाठ, ग्राफिक, हस्ताक्षर, क्यूआर वाटरमार्क, मेटाडाटा र स्टेगनोग्राफिक वाटरमार्कको साथ सजिलै सुरक्षित गर्नुहोस्। फोटोमा देखिने वाटरमार्क थप्दै यो तपाईंको सिर्जना र स्वामित्वमा रहेको छ। वाटरमार्किंग बढ्दो महत्त्वपूर्ण छ र छविमा तपाईंको नाममा हस्ताक्षर गर्नु जस्तै हो। एक वाटरमार्क subtly प्रदर्शित, तपाईंको फोटो जहाँ जान्छ, यो तपाईंको हो। वाटरमार्किंग तपाईंको ईमेल, यूआरएल, व्यक्तिगत सन्देश वा मजा ग्राफिक्स कुनै फोटो वा पोकेमोन गो स्क्रिनशट वा भिडियोमा थप्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अनुप्रयोग स्टोरमा १ 19835***** star स्टार समीक्षाका लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद! पेशेवरहरू, व्यवसाय र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि आवश्यक वाटरमार्किंग अनुप्रयोग। सजिलैसँग, आफ्नो फोटोहरूलाई पाठ, ग्राफिक, हस्ताक्षर वा QR वाटरमार्कको साथ सुरक्षित गर्नुहोस्। फोटोमा देखिने वाटरमार्क थप्दै यो तपाईंको सिर्जना र स्वामित्वमा रहेको छ। वाटरमार्किंग बढ्दो महत्त्वपूर्ण छ र छविमा तपाईंको नाममा हस्ताक्षर गर्नु जस्तै हो। एक वाटरमार्क subtly प्रदर्शित, तपाईंको फोटो जहाँ जान्छ, यो तपाईंको हो। वाटरमार्किंग तपाईंको ईमेल, यूआरएल, व्यक्तिगत सन्देश वा कुनै फोटो वा पोकेमोन गो स्क्रिनशटमा मजा ग्राफिक्स थप्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
"यो आईओएसमा मिति देख्नको लागि सबै भन्दा राम्रो वाटरमार्किंग अनुप्रयोग हो।"
- टेरी सेतो, bestappsite.com मा समीक्षा
दैनिक अनुप्रयोग शो द्वारा भिडियो समीक्षा:
महान समीक्षा, प्रतिक्रिया र सुझावहरूको लागि सबै iWatermark प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद।
iWatermark, सबै4प्लेटफर्महरू आईफोन / आईप्याड, म्याक र विन्डोज को लागी मात्र पानी मार्किंग उपकरण उपलब्ध छ। iWatermark फोटोहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय व्यावसायिक वाटरमार्किंग उपकरण हो।
सामाजिक मिडिया फेसबुक, फ्लिकर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, क्यामेरा एल्बम, क्लिपबोर्ड वा ईमेल (resolution रिजोलुसन विकल्पहरू) लाई पूर्ण रिजोलुसनमा साझा गर्दै।
प्रश्न: वाटरमार्क भनेको के हो?
A: शताब्दीयौं अघि वाटरमार्कहरू कागज निर्माण प्रक्रियाको क्रममा पहिचान मार्कको रूपमा शुरू भयो। कागज निर्माणको क्रममा भिजा कागजमा छाप लगाईन्थ्यो छाप / प्रतीकको साथ। चिनो लगाइएको क्षेत्र वरपरको कागज भन्दा पातलो रह्यो, त्यसैले नाम वाटरमार्क। त्यो कागज, जब सुख्खा र प्रकाश सम्म पकड, वाटरमार्क देखायो। पछि यो प्रक्रिया आधिकारिक कागजातहरूको प्रामाणिकता, पैसा र सामान्यतया जालसाजी रोक्न प्रयोग गरियो।
प्रश्न: आज वाटरमार्किंग कसरी प्रयोग भइरहेको छ?
A: डिजिटल वाटरमार्किंग वाटरमार्किंगको सबैभन्दा नयाँ रूप हो। कागजमा भौतिक वाटरमार्कहरू जस्तै, डिजिटल वाटरमार्क मालिक / सिर्जनाकर्ता पहिचान गर्न र छविहरू, अडियो र भिडियो जस्ता डिजिटल मिडिया प्रमाणीकरण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
प्रश्न: किन वाटरमार्क?
- जब फोटोहरू / भिडियोहरू भाइरल हुन्छन् तिनीहरू सबै दिशाहरूमा अप्रशिक्षित रूपमा उडान गर्दछन्। प्रायः मालिक / सिर्जनाकर्ता जानकारी हराएको वा बिर्सिएको हुन्छ।
- तपाईंको फोटो, कलाकृति वा अरूले प्रयोग गरेको भिडियोहरू, शारीरिक उत्पादनहरूमा, विज्ञापनमा र / वा वेबमा हेरेर आश्चर्यचकित हुनबाट बच्नुहोस्।
- बौद्धिक सम्पत्ती (आईपी) संघर्ष, महँगो मुकदमेबाजी र साहित्यवाहकहरूबाट टाउको दुख्ने बेवास्ता गर्नुहोस् जसले दावी गर्छन् कि तपाईंलाई थाहा छैन कि तपाईंले यो दृश्य र / वा अदृश्य वाटरमार्कहरू थपेर सिर्जना गर्नुभएको हो।
- किनकि सामाजिक मिडियाको विस्तारित प्रयोगको गति छिटो भएको छ जसको साथमा फोटो / भिडियो भाइरल हुन सक्छ।
प्रश्न: के गर्न सकिन्छ?
Water वाटरमार्क थपेको रूपमा जोडले प्रदर्शन गर्दछ, तपाईंको फोटो वा भिडियो जहाँ गए पनि, यो तपाईंको स्वामित्वमा रहेको छ।
✔ सँधै, नाम, ईमेल वा url को साथ वाटरमार्क ताकि तपाईंको सिर्जनाहरू तपाईंसँग केहि दृश्य र अदृश्य कानूनी जडान छ।
Release तपाइँको रिलिज सबै फोटो / भिडियो पानी मार्किंग द्वारा आफ्नो कम्पनी, नाम र वेबसाइट प्रचार र संरक्षण।
माथिका सबैले सफ्टवेयरको लागि तस्विर / भिडियो स्वामित्वको सुरक्षा र प्रमाणितको लागि मांग सिर्जना गरेको छ।
* छुने इशाराहरू।
** वाटरमार्क स्थान सार्न क्लिक गर्नुहोस्।
** चुटकी / जूम वाटरमार्क को आकार को विस्तार / अनुबंध गर्न।
** कुनै पनि कोणमा वाटरमार्क घुमाउन एकैचोटि दुई औंलाहरू।
* ब्याच प्रक्रिया (सबै एकैचोटि) वा अनुक्रमिक।
* सजिलैसँग वाटरमार्क स्केल, अस्पष्टता, फन्ट, रंग, आकार, स्थिति र कोण समायोजित गर्नुहोस्।
* तपाईंको आफ्नै सूक्ष्म पाठ वा ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस् वा समावेश गरिएको उदाहरण वाटरमार्क्सबाट चयन गर्नुहोस् (दुबै पाठ र ग्राफिक्स)।
* समावेश गरिएका उदाहरणहरू दुबै पाठ (नामहरू, मितिहरू, ट्याग डाटा, आदि) र ग्राफिक (हस्ताक्षर, लोगोहरू, आदि) वाटरमार्कहरू हुन् जुन तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिन्छ।
* १ text२ फन्टहरू तपाईंको टेक्स्ट वाटरमार्क ११२ + 162० एन्ड्रोइड फन्टहरूका लागि।
* प्रत्येक फन्ट प्रदर्शित गर्दछ।
* High 34 उच्च-रिजोलुशन वॉटरमार्क।
* तपाईंको आफ्नै ग्राफिक वाटरमार्क आयात गर्नुहोस् आफैंको साथ ईमेल पठाएर
* एक बटन वाटरमार्कको रूपमा प्रयोगको लागि तपाइँको हस्ताक्षरको आयात। * म्यानुअल पूर्ण र सजिलै बुझ्न।
* क्यूआर वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस् जुन एक बारकोड जस्तो हो। QR कोडमा सूचनाको 4000००० अक्षरहरू हुन सक्दछ। QR कोडहरू त्यसपछि स्क्यानर वा स्मार्टफोनको साथ पढ्न सकिन्छ सही अनुप्रयोगको साथ तपाईंले एन्कोड गर्नुभएको जानकारीको खुलासा गरेर।
तपाईंको फोटोहरू सुरक्षित गर्नुहोस्
डिजिटली तपाईंको फोटो / कलाकृति iWatermark को साथ दावी गर्न, सुरक्षित गर्न र तपाईंको बौद्धिक सम्पत्ती र प्रतिष्ठा कायम गर्न हस्ताक्षर गर्नुहोस्।
- तस्विरहरू भाइरल हुन्छन् र त्यसपछि तिनीहरू विश्वव्यापी रूपमा उड्दछन्। नाम, ईमेल वा url को साथ वाटरमार्क ताकि तपाईंको फोटो तपाईंसँग एक दृश्य र कानूनी जडान हो।
- तपाईंको कम्पनीको ब्रान्ड निर्माण गर्नुहोस्, तपाईंको सबै छविहरूमा कम्पनी लोगो राखेर।
- वाटरमार्कको रूपमा QR कोड प्रयोग गरेर तपाईंको कम्पनी, नाम र वेबसाइट प्रमोट गर्नुहोस्।
- वेबमा वा विज्ञापनमा कतै तपाईंको फोटो र / वा कलाकृति देखेर आश्चर्यचकित हुनबाट बच्नुहोस्।
- बहस, महँगो मुकदमेबाजी र साहित्यवाहकहरूबाट टाउको दुखाइ जोगाउनुहोस् जो दावी गर्छन् कि उनीहरूले जान्दैनन् कि तपाईंले यो बनाउनु भएको हो।
- बौद्धिक सम्पत्ती (आईपी) स्क्वाब्बलहरू त्याग्नुहोस्।
Q: म मेरो हस्ताक्षरलाई मेरो वाटरमार्कको रूपमा मुद्रण गर्न चाहन्छु। म कसरी मेरो ग्राफिक हस्ताक्षर उदाहरणहरू, पिकासो, बेन फ्रान्कलीन, आदि लाई थप्न सक्छु?
A: हाम्रो हस्ताक्षर उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् वा तपाईंको कम्प्युटरमा .png ग्राफिक्स बनाउनुहोस्, आफैंलाई ईमेल गर्नुहोस्, तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा ईमेल खोल्नुहोस् र तपाईंको फोटो एल्बममा बचत गर्नुहोस्। आईवटरमार्कमा ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको फोटो एल्बमबाट नयाँ ग्राफिकको रूपमा जोड्नको लागि ग्राफिक छनौट गर्नुहोस्।
Q: के यसले क्यानन, सोनी, निकन, फुजी, ओलम्पससँग काम गर्दछ?
महत्वपूर्ण: जोन ह्यान्कक, बेन फ्रेंकलिन, ग्यालिलियोका हस्ताक्षरहरू केवल ग्राफिक वाटरमार्कका उदाहरणहरू हुन्। तिनीहरू यी ऐतिहासिक व्यक्तिको वास्तविक हस्ताक्षर हुन्। त्यहाँ के संभव छ भनेर देखाउन तिनीहरू उदाहरणका रूपमा छन्। हामी तपाईंलाई आफ्नै हस्ताक्षर, लोगो वा QR कोड वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्न सल्लाह दिन्छौं।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिएको छ वा सुझाव छ भने।
प्लम आश्चर्यजनकको बारेमा
प्लम आश्चर्यजनक म्याक ओएस, आईओएस, एन्ड्रोइड र विन्डोजको लागि उत्पादकता र फोटोग्राफिक सफ्टवेयर सिर्जना गर्नमा माहिर छ। प्लम अमेजिंग एक निजी रुपमा आयोजित संयुक्त राज्य अमेरिका मा तर विश्वव्यापी कार्यालयहरु संग स्थित कम्पनी हो। तिनीहरूको सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरू मध्ये प्रतिलिपिपास्ट ®, iKey, iClock ®, iWatermark®, पिक्सेलस्टिक, स्पीचमेकर र फोटोम्याट हुन्। प्लम अमेजिंग १ 1995 XNUMX since देखि मोबाइल र डेस्कटप अनुप्रयोगहरूको एक विश्वव्यापी प्रदायक हो।
- भर्खरको एप्पल उपकरणहरू र ओएसका लागि पुन: कम्पाइल गरियो
- विविध परिवर्तनहरू
- आईओएस ११ मा परिवर्तनको कारणले ट्याग चरहरू, जस्तै ट्रेडमार्क (™), प्रतिलिपि अधिकार (©), दर्ता गरिएको ट्रेडमार्क (®), मिति र समय, पहुँच गर्न गाह्रो हुनको लागि, अब स्थिर गरिएको छ।
- भर्खरको xcode साथ संकलित
- विविध प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस मा सुधार
- आईओएस ११ मा उत्कृष्ट काम गर्दछ
- आईफोन एक्समा राम्रो देखिन्छ
- सानो परिवर्तन
Inc सहित nav ट्याप नेभ बारलाई सबै मार्ग तल स्क्रोल गर्न (नयाँ फोटोहरू) र माथि (सब भन्दा पुरानो)।
- आईओएस ११, १०, and र; आईप्याड / आईफोन उपयुक्त छ।
- अपडेट गरिएको आइकनहरू।
- आईओएस ११ को लागि अपडेट गरिएको
- एक्सकोड ११ सँग कम्पाइल गरिएको
- फोटो छनौटकर्ताको प्रयोग गरेर केहि उपकरणहरूमा तस्बिरहरू खोल्नेसँग समस्या समाधान भयो।
- केही प्रयोगकर्ताहरूले फोटोहरूको समूहमा जब वाटरमार्किंग गर्दै अनुप्रयोगलाई स्थिर गरिएको रिपोर्ट गर्दै थिए जब अनुप्रयोग वास्तवमा स्थिर थिएन, यो केवल व्यस्त थियो आईक्लाउडबाट बहु फोटोहरू डाउनलोड गर्न र उनीहरूलाई संकुचित गर्न। त्यो समय लिन्छ त्यसैले हामीले प्रयोगकर्तालाई सबै कुरा ठीक छ भनेर थाहा दिन र त्यस गतिविधि समाप्त हुनको लागि एक क्षणको लागि प्रतीक्षा गर्न "लोडि ... ..." प्रगति संवाद थप्यौं।
- कम्पाईल गरिएको र पछिल्लो एक्सकोडको साथ निर्मित।
- केहि सामान्य सुधारहरू।
+ फिक्स: "इन्टरनेटमा वेटरार्कड फोटो पठाउनुहोस्" अब आईओएस iOS अन्तर्गत काम गर्दछ।
+ फिक्स: "फोटो आयात गर्नुहोस्" फोटोहरूको अर्डर फिक्स।
+ फिक्स्ड: वाटरमार्क फाइल पार्स गर्ने क्रममा क्र्यास स्टार्टअप।
+ फिक्स्ड: iOS8.3- अनुकूल फोटो छनोटकर्ता (नयाँ “PH” बनाम पुरानो “AL”। “AL” अझै आईओएस7का लागि समर्थित छ)
+ फिक्स गर्नुहोस्: वाटरमार्क हटाउनाले अर्को एकमा स्वचालित रूपमा स्विच हुन्छ।
+ ट्विक: "लाइभ" रंग पिकि।।
+ टवाक: "प्रत्यक्ष" स्लाइडर-नियन्त्रित गुणहरू वास्तविक समयमा परिवर्तन हुन्छ,
यसको सम्बन्धित पाठ क्षेत्रमा मूल्यमा एक प्रकारको रूपमा।
+ निश्चित "बहु-लाइन पाठले अन्तिम रेखा देखाउँदैन" बग।
iWatermark को लागी मद्दत
आईफोन / आईप्याड र एन्ड्रोइड
आइवाटरमार्कमा स्वागत छ
IWatermark डाउनलोड गर्नुभएकोमा धन्यवाद! वाटरमार्किंग फोटोहरूका लागि आईवटरमार्क सबैभन्दा लोकप्रिय बहु-प्लेटफर्म उपकरण हो। यो उपलब्ध छ IWatermark प्रो को रूपमा म्याक, IWatermark को रूप मा जीत, आईफोन / आईप्याड र Android पनि। iWatermark ले तपाईंलाई कुनै पनि फोटो वा ग्राफिकमा तपाईंको व्यक्तिगत वा व्यवसायिक वाटरमार्क थप्न अनुमति दिन्छ।
एकचोटि यो देखिने वाटरमार्कले तपाईंको फोटो र कलाकृतिको सिर्जना र स्वामित्व प्रदर्शन गर्दछ। iWatermark ले तपाईंलाई ग्राफिक, QR वा पाठ वाटरमार्क सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ त्यसपछि अस्पष्टता, रोटेशन, र color्ग, साइज, आदि परिवर्तन गर्न सम्पादन गर्नुहोस् स्पर्श मार्फत सजिलै ईमेल मार्फत साझेदारी गर्न, फेसबुक, र twitter। साझेदारी गर्नुहोस् फ्लिकर ईमेल मार्फत।
नि: शुल्क र सशुल्क संस्करण
त्यहाँ दुई अनुप्रयोगहरू छन्:
iWatermark नि: शुल्क अनुप्रयोग यस्तो देखिन्छ
धेरै व्यक्तिहरूले अनुप्रयोग र सुविधाहरू प्रयोग गर्न नि: शुल्क प्रयास गर्छन्। यसको एक हरियो ब्यानरमा नि: शुल्क संग आईकन छ। योसँग कुनै विज्ञापन छैन र तपाईंलाई सबै सुविधाहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ तर हरेक फोटोमा हाम्रो वाटरमार्क थप गर्दछ जुन भन्छ, 'आईवटरमार्क फ्रीको साथ सिर्जना गरिएको'। तपाईंलाई यसको प्रयोग जारी राख्न वा सस्तो सशुल्क अनुप्रयोगमा अपग्रेड गर्न स्वागत छ जुन हाम्रो थप वाटरमार्क छैन। यदि तपाइँ भुक्तान गरिएको संस्करण पाउनुहुन्छ भने नि: शुल्क हटाउनुहोस्।
iWatermark यस्तो देखिन्छ। यो भुक्तान गरिएको संस्करण हो
यस भुक्तान गरिएको संस्करणले iWatermark को निरन्तर विकासको समर्थन गर्दछ। प्रत्येक चोटि कसैले प्रतिलिपि खरीद गर्दा यसले अनुप्रयोगलाई सुधार गर्न थप प्रोग्रामि programming समर्थन गर्दछ जसले सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। हो! सशुल्क अनुप्रयोगले तपाईंको फोटोमा हाम्रो वाटरमार्क थप गर्दैन। नियमित संस्करण किन्नु यस अनुप्रयोगमा हाम्रो निरन्तर काम समर्थन गर्दछ। धन्यवाद!
महत्वपूर्ण: Remember खरिद पछि नि: शुल्क संस्करण मेटाउनुहोस्। यसले तपाईलाई भ्रमित गर्न सक्छ र तपाईलाई अब यो आवश्यक पर्दैन।
यदि तपाईंलाई जारी सुधारहरू मनपर्दछ र यो जारी राख्न चाहनुहुन्छ भनेकृपया एक अनुप्रयोग स्टोर समीक्षा सबमिट गर्नुहोस् र / वा तपाईंको साथीहरूलाई (विशेष रूपमा फोटोग्राफरहरू) अनुप्रयोगको बारेमा जान दिनुहोस्। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम Pinterest, आदि मा तपाईं द्वारा एक सरल उल्लेख कसैले कसैलाई डाउनलोड गर्न निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ जो हामीलाई तपाईंको लागि यसलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। हामी तपाइँबाट सुन्न मन पराउछौं। धेरै धन्यवाद!
महत्वपूर्ण: के तपाईं आफ्नो वाटरमार्क गरिएका फोटोहरू अधिक व्यक्तिहरूद्वारा हेर्न चाहानुहुन्छ? IWatermark अनुसरण गर्नुहोस्ट्वीटर, @Facebook, @ इन्स्टग्राम, @Pinterest, इत्यादि) र तपाइँको उत्तम आर्टवर्कहरू ट्याग गर्नुहोस् # iWatermark फिचर गर्नका लागि!
हामीलाई जस्तै फेसबुकमा कूपन, समाचार, प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, तपाईंको वाटरमार्क फोटोहरू।
अन्य बेर आश्चर्यजनक सफ्टवेयर
म्याक / विन: यदि तपाईं हाम्रो म्याक वा विन सफ्टवेयर जाँच गर्न चाहानुहुन्छ भने, हाम्रो साइटमा आउनुहोस् र नि: शुल्क ट्राउट डाउनलोड गर्नुहोस्। आईकलोकलाई एउटा प्रयास दिनुहोस् यो आवश्यक / उपयोगी / रमाईलो छ र पुरानो एप्पल मेनूबार घडी भन्दा १० गुणा बढी राम्रो छ।
म्याक वा विन संस्करणहरूमा थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
आईओएस / एन्ड्रोइड: IWatermark प्रयोग पछि अर्को चरण अप iWatermark + हो। यदि तपाईं प्रो फोटोग्राफर हुनुहुन्छ वा इन्स्टाग्राम, Pinterest, वा ट्विटरको भारी प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईंले iWatermark + अमूल्य पाउनुहुनेछ। IWatermark + नि: शुल्क संस्करण कोसिस गर्नुहोस् यहाँ। यो सबै क्षमताहरूको एक सिंहावलोकन प्राप्त गर्न iWatermark + को लागि म्यानुअल जाँच गर्नुहोस् यहाँ। एक iWatermark मालिक को रूप मा तपाईं by 1.99 (यस समयमा) को लागी अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ सिधा अनुप्रयोग स्टोरमा $ 3.99. for for को लागि बन्डल प्राप्त गर्न त्यसपछि यदि तपाईंले मूल iWatermark (सामान्यतया १.1.99 1.99) को लागि भुक्तान गर्नुभयो भने एप्पलले स्वचालित रूपमा कटौती गर्दछ जब तपाईं बन्डल खरीद गर्नुहुन्छ जसले iWatermark + मा मात्र $ १.XNUMX XNUMX अपग्रेड गर्ने लागत ल्याउँछ।
iWatermark गम्भीर गजबको छ। म यो भन्न सक्दछ किनकि मैले म्यानुअल लेखेको थिएँ र प्रोग्रामिंग गरेन। म दुबै iWatermark र iWatermark + मेरो काममा र मनोरन्जनको सबै समयमा प्रयोग गर्दछु। एकछिनका लागि नसोच्नुहोस् कि सबै पानी मार्किंग उपकरणहरू एक समान छन्। iWatermark सबै भन्दा राम्रो हो। तर अर्को चरण भनेको iWatermark + हो जुन आमूल रूपमा भिन्न र अविश्वसनीय रूपले शक्तिशाली छ। अनुप्रयोगमा प्रोग्रामिंगको एक विशाल रकम छ। प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस सुन्दर ढंगले कसरी फोटोग्राफरहरू काम गर्दछ। यसको लागि मेरो शब्द नलिनुहोस्, हेर्नुहोस् मार्गदर्शन or iWatermark + को लागी नि: शुल्क संस्करण कोशिस गर्नुहोस् जस्तै तपाईंले iWatermark को लागी गर्नुभयो।
कृपया ईमेल गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई समस्या छ भने। १ स्टारको समीक्षा राख्नु र गुनासो लेख्नु वास्तवमै समीक्षा होईन र समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्दैन। एक समीक्षा राख्नु जुन वास्तवमा समीक्षा होइन तर सहयोगको लागि कल हो, हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् र हामी चीजहरू छिटो खाली गर्न सक्छौं कि यो बग वा गलतफहमी हो। विवरण र एक स्क्रीनशट मद्दत। हामी तपाईंहरूसँग कुरा गर्न मन पराउछौं र सबै खुशी छन् भनेर निश्चित गर्न हामी कडा परिश्रम गरिरहेका छौं। धन्यबाद।
संस्करण परिवर्तनहरू IOS को लागि
संस्करण परिवर्तनहरू Android को लागि
IWatermark डाउनलोड गर्नुभएकोमा धन्यवाद! वाटरमार्किंग फोटोहरूका लागि आईवटरमार्क सबैभन्दा लोकप्रिय बहु-प्लेटफर्म उपकरण हो। यो उपलब्ध छ IWatermark प्रो को रूपमा म्याक, IWatermark को रूप मा जीत, आईफोन / आईप्याड र Android पनि। iWatermark ले तपाईंलाई कुनै पनि फोटो वा ग्राफिकमा तपाईंको व्यक्तिगत वा व्यवसायिक वाटरमार्क थप्न अनुमति दिन्छ। एकचोटि यो देखिने वाटरमार्कले तपाईंको फोटो र कलाकृतिको सिर्जना र स्वामित्व प्रदर्शन गर्दछ। iWatermark ले तपाईंलाई ग्राफिक, QR वा पाठ वाटरमार्क सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ त्यसपछि अस्पष्टता, रोटेशन, र color्ग, साइज, आदि परिवर्तन गर्न सम्पादन गर्नुहोस् स्पर्श मार्फत सजिलै ईमेल मार्फत साझेदारी गर्न, फेसबुक, र twitter। साझेदारी गर्नुहोस् फ्लिकर ईमेल मार्फत।
आईफोन / आईप्याड / एन्ड्रोइडका लागि अब दुई संस्करणहरू छन्: iWatermark नि: शुल्क र iWatermark। दुई बीचको भिन्नता केवल यो हो कि iWatermark नि: शुल्क एउटा सानो वाटरमार्क राख्दछ जसले भन्छ कि 'iWatermark निःशुल्क - यस वाटरमार्क हटाउन अपग्रेड' चित्रको तल। नि: शुल्क संस्करणमा नियमित संस्करणमा स्तरवृद्धि गर्न बटन मुख्य पृष्ठमा छ। धेरैले त्यो ठीक फेला पार्नेछन्, अन्यथा त्यो वाटरमार्क हटाउन सस्तो अपग्रेड छ। अपग्रेडिंगले iWatermark को विकासलाई समर्थन गर्दछ, यो यस्तो परिष्कृत प्रोग्रामको लागि सानो मूल्य हो।
iWatermark पाठ (नाम, मिति, आदि) र ग्राफिक (हस्ताक्षर, लोगो, आदि) वाटरमार्कको उदाहरणको साथ आउँदछ जुन तपाईं iWatermark जाँच गर्न तुरून्त प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर चाँडै तपाईं आफ्नो वाटरमार्क, पाठ वा ग्राफिक्स सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ। पाठ वाटरमार्कहरू तपाईले सिधा iWatermark मा बनाउन सक्नुहुन्छ र पुन: प्रयोगको लागि बचत गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिक वाटरमार्कहरू, जस्तै हस्ताक्षर वा लोगोहरू आयात गर्न सकिन्छ:
हस्ताक्षर / ग्राफिक स्क्यानर उपकरण प्रयोग गरेर जुन iWatermark मा विशेष रूपमा उपलब्ध छ। यस उपकरणले तपाईंलाई आफ्नो हस्ताक्षर वा ग्राफिकको फोटो लिन मद्दत गर्दछ, यसलाई आयात गर्दछ र वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न पृष्ठभूमिमा पारदर्शिता थप गर्दछ।
तपाईंको कम्प्युटर प्रयोग गरेर (हेर्नुहोस् सोधिने प्रश्न तल थप विवरणहरूको लागि तल) र त्यसपछि आफैंलाई ईमेल गरियो, तपाईंको आईओएस उपकरणमा संलग्न फाईललाई फोटो लाइब्रेरीमा बचत गर्नुहोस्। एक पटक तस्विर लाइब्रेरीमा तपाई यी छविहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ (जस्तै तपाईले हस्ताक्षर वा लोगोको स्वामित्व पाउनुभयो) ग्राफिक वाटरमार्क बनाउँदा।
महत्वपूर्ण: iWatermark ले केवल तपाईंको फोटोहरूको प्रतिलिपिमा वाटरमार्क गर्दछ। यसले कहिले पनि मूल फोटो परिवर्तन गर्दैन। सँधै निश्चित गर्नुहोस् तपाइँको मूल फोटोहरू जगेडा गर्न।
डिजिटली तपाईंको फोटो / कलाकृति iWatermark को साथ दावी गर्न, सुरक्षित गर्न र तपाईंको बौद्धिक सम्पत्ती र प्रतिष्ठा कायम गर्न हस्ताक्षर गर्नुहोस्। तपाइँको सबै छविहरूमा तपाइँको कम्पनी लोगो राखेर तपाईको कम्पनी ब्रान्ड निर्माण गर्नुहोस्। तपाईंको फोटोहरू र / वा कलाकृति वेबमा वा विज्ञापनमा कतै हेरेको आश्चर्यलाई वेवास्ता गर्नुहोस्। चोरी र टाउको दुखाइ नगर्नुहोस् जसले दावी गर्छन् कि उनीहरूलाई थाँहा थिएन कि तपाईंले यो सृष्टि गर्नुभयो भनेर। आईपी ​​को दुरुपयोग को यी मामिलाहरु मा संलग्न हुन सक्छ कि महँगो मुकदमेबाजी बेवास्ता गर्नुहोस्। बौद्धिक सम्पत्ती स्क्वाबललाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
वाटरमार्किंग को अवलोकन
१. वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्। तस्विर लिनुहोस् वा ब्याकड्रपको रूपमा प्रयोग गर्न वाटरमार्क सिर्जना गर्न पाठ वा ग्राफिकबाट प्रयोग गर्नुहोस्। एक पाठ वा ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्। त्यो वाटरमार्क बचत गर्नुहोस्।
२. फोटोमा वाटरमार्क गर्न। फोटो लिनुहोस् वा छनौट गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको वाटरमार्क रोलरबाट चयन गर्नुहोस्।
Save. बचत गर्नुहोस् र / वा साझेदारी गर्नुहोस्।
- आईफोन / आईप्याडमा वाटरमार्क गरिएका फोटोहरू क्यामेरा रोलमा र 'iWatermark' फोल्डरमा जान्छन्।
- एन्ड्रोइड वाटरमार्क फोटोहरूमा बाह्य भण्डारणमा 'iWatermarked छविहरू' जानुहोस्।
समावेश गरिएको उदाहरण वाटरमार्क (दुवै पाठ र ग्राफिक्स) को चयनबाट छनौट गर्नुहोस् वा तपाईंको आफ्नै पाठ वा ग्राफिक वाटरमार्क थप्नुहोस्। तपाईंको अनुकूलित वाटरमार्क पाठ, एक व्यापार लोगो वा तपाईंको हस्ताक्षर हुन सक्छ र तपाईं सजीलै यसको मापन, अस्पष्टता, फन्ट, रंग र कोण समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए वाटरमार्क रोलरबाट हाम्रो एउटा उदाहरण वा आफ्नै आफ्नै छनोट गर्नुहोस् र कुनै पनि फोटोमा तुरुन्तै वाटरमार्क चयन गर्नुहोस्।
तपाईंको फोटो लाइब्रेरीमा बचत गर्नुहोस् वा फेसबुक / ट्विटर / फ्लिकर वा विभिन्न रिजोलुसनमा ईमेलको माध्यमबाट साझेदारी गर्नुहोस्।
कसरी वाटरमार्क गर्ने
तपाईं कि त:
१. वाटरमार्क (ग्राफिक वा पाठ वा QR) सिर्जना गर्नुहोस्।
२. वाटरमार्क फोटो।
महत्वपूर्ण: वास्तवमा वाटरमार्किंगका लागि वाटरमार्क सिर्जना गर्न गल्ती नगर्नुहोस्।
माथिका दुबैका लागि तपाईंले फोटो चयन गरेर वा सुरु गरेर सुरु गर्नु पर्छ।
त्यसोभए एक पटक तपाईले फोटो चयन गर्नु भयो र यो मुख्य स्क्रिनको पृष्ठभूमि हुन्छ तपाई अब कुनै पनि lowest तल्लो बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ।
'आईवटरमार्क फोटो (हरू)वास्तवमा निर्मित वा तपाईंको आफ्नै वाटरमार्कको प्रयोग गरेर फोटो वाटरमार्क गर्न
'पाठ वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्'(फोटो वाटरमार्क गर्दैन)
'ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्'(फोटो वाटरमार्क गर्दैन)
वाटरमार्क फोटो (हरू)
यस बटन क्लिक गर्दा तपाईं वाटरमार्किंग पृष्ठमा लग्नुहुनेछ। यहाँ तपाईं पृष्ठको तल मेनूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क्स, एक रोलर स्लाइड हुनेछ र धेरै उदाहरण वाटरमार्क वा तपाईंको आफ्नै वाटरमार्क मध्ये एक छनौट हुनेछ। एकचोटि तपाईंले एक छनौट गर्नुभयो तपाईं आफ्नो फोटोमा देख्नुहुनेछ। फोटो वा वाटरमार्क मेनूमा क्लिक गर्नुहोस् रोलर गायब हुन। अब वाटरमार्क समायोजन गर्न टच प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको औंलाको साथमा पृष्ठमा यसलाई सार्न वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस्।
वाटरमार्कको आकार विस्तार गर्न / सम्झौताको लागि पिन्च / जुम प्रयोग गर्नुहोस्।
एकै पटक दुई औंलाहरूले छुनुहोस् र वाटरमार्क घुमाउन घुमाउनुहोस्।
सेव हिट गर्नुहोस् र यसले तपाईंको फोटो लाइब्रेरीमा त्यस वाटरमार्कको साथ त्यस फोटोको प्रतिलिपि बचत गर्दछ वा ईमेल, फेसबुक, आदि मार्फत साझेदारी गर्न सक्दछ।
महत्वपूर्ण: तपाईं स्थान, agle र आकार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईं अस्पष्टता, फन्ट, वा रंग परिवर्तन गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। ती परिवर्तन गर्न को लागी एक नयाँ वाटरमार्क सृजना गर्नुहोस् ती सुविधाहरूको जुन तपाईं चाहानुहुन्छ।
एक पाठ वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्
पहिले तपाईंको वाटरमार्क सिर्जना गर्न र हेर्न मद्दत गर्न पृष्ठभूमिको रूपमा फोटो छान्नुहोस्। तपाईं पछि वाटरमार्क बनाउने र बचत गर्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा त्यो तस्विरलाई वाटरमार्क नगर्दै।
एकचोटि तपाईं पाठ बनाउने वाटरमार्क पृष्ठमा हुनु भएपछि तलको बायाँमा नयाँ मेनू देख्नुहुनेछ सम्पादन भनिन्छ। त्यो क्लिक गर्नुहोस् र शीर्षमा तपाईले मेनु वस्तु पाठ देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो पाठ संवादमा तपाईले चाहानु भएको जस्तो टाइप गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले गर्नुभयो कि मापन, अस्पष्टता, फन्ट, र color र / वा कोण परिवर्तन गर्न अन्य सम्पादन मेनू बटनहरू मध्ये कुनै छनौट गर्नुहोस् तिनीहरूलाई तपाईंको मनपर्नेमा समायोजित गर्न।
तल बायाँ अवस्थित सम्पादन मेनूमा बटनहरू फन्ट, कोण, स्केल, अस्पष्टता, आदि परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्नुहोस् वा सामान्य आईओएस विधिहरूमा छुनुहोस्।
वाटरमार्कलाई सार्नको लागि केवल यसलाई आफ्नो औंलाले छुनुहोस् र जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ ड्र्याग गर्नुहोस्।
कोण परिवर्तन गर्न कोण बटन क्लिक गर्नुहोस् वा वाटरमार्कमा दुई औंलाहरू राख्नुहोस् र कोण परिवर्तन गर्न मोड गर्नुहोस्।
आकार परिवर्तन गर्न सामान्य पिन्च वा फन्ट साइज विस्तार / अनुबंध गर्न जुम प्रयोग गर्नुहोस्।
पाठ क्षेत्रमा तपाईले किबोर्डबाट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष वर्णहरू जस्तै ©, ™ र ® चयन गर्नुहोस्। साथै मिति र समयलाई वाटरमार्कमा थप्न सकिन्छ।
IWatermark मा उपलब्ध १ f० फन्टहरू मध्ये एउटा चयन गर्नुहोस्। पाठ र फन्ट वास्तविक फन्ट अनुहार, wysiwig मा प्रदर्शित हुन्छ (जे तपाईले देख्नुहुन्छ त्यो तपाईलाई के हुन्छ, तल हेर्नुहोस्)।
कोण परिवर्तन गर्नुहोस् मेनू मार्फत वा दुई औंलाहरूमा राखेर र घुमाएर ('s० को नृत्य होइन तर टच इशारा)।
ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्
ग्राफिक वाटरमार्कका लागि तपाई कुनै पनि ग्राफिक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तर ती पारदर्शी पृष्ठभूमि भएको ग्राफिक्स हुनुपर्दछ। नमूना हस्ताक्षर, प्रतीक र अन्य ग्राफिक्स हामी पारदर्शी पृष्ठभूमि छ र .png फाईलहरू हो। यसको मतलब हस्ताक्षर आफैं देखिएको छ तर पृष्ठभूमि पारदर्शी छ र फोटोलाई तल देखाउँदछ। यो गर्नको लागि फाइल ढाँचालाई .png भनिन्छ र यसले पृष्ठभूमिलाई पारदर्शी हुन अनुमति दिन्छ (ajpg ले यो पारदर्शितालाई अनुमति दिँदैन, .png प्रयोग गर्नुपर्दछ)।
जाँच गर्नुहोस् सोधिने प्रश्न (तल) वा गुगल 'png' र 'पारदर्शिता' पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ png फाईलहरू बनाउने बारेमा थप जान्नको लागि।
त्यहाँ ways तरीकाहरू छन् यी पारदर्शी पृष्ठभूमि ग्राफिक्सलाई वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न iWatermark मा। तपाईं या त गर्न सक्नुहुन्छ
१. वेबमा पारदर्शिता सहित png ग्राफिक खोजी गरेर खोज्नुहोस्। छुनुहोस् र ग्राफिकमा समात्नुहोस्
२. निर्माण गरिएको उपकरण iWatermark स्क्यान हस्ताक्षर / ग्राफिक वा
Your. तपाईंको कम्प्युटरमा तपाईंको हस्ताक्षर / ग्राफिकको .png फाईल बनाउनुहोस्, आफैंलाई ईमेल गर्नुहोस् र तपाईंको फोटोहरूमा प्रयोग गर्न यसलाई आयात गर्नुहोस्।
१. वेबमा एक .png ग्राफिक खोज्नुहोस्।
वेबमा पारदर्शिता सहित png ग्राफिक खोजी गरेर खोज्नुहोस्। टच गर्नुहोस् र क्यामेरा एल्बममा बचत गर्न ग्राफिकमा समात्नुहोस्। यो आईओएस र एन्ड्रोइड मा काम गर्दछ।
२.वाटमार्क हस्ताक्षर / ग्राफिक स्क्यानर
यो विशेष उपकरण हो जुन हामीले विशेष रूपमा तपाईंको हस्ताक्षर र कला आयात गर्न सिर्जना गर्‍यौं ताकि तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा यो कसरी गर्ने भनेर सिक्नुपर्दैन। पहिले तपाईको हस्ताक्षर कालो पेनमा हस्ताक्षर गर्नुहोस् (कुनै बाक्लो तर केही कलम र सानो भन्दा जादुको मार्कर उत्तम छ) प्रयोग गरी धेरै सेता कागजमा। अर्को मुख्य पृष्ठबाट ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस् चयन गर्नुहोस् त्यसपछि स्क्यान हस्ताक्षर चयन गर्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले त्यसो गर्नुभयो भने फोटो खिच्न क्यामेरा खुल्नेछ। त्यसोभए राम्रो उज्ज्वल प्रकाशमा छाया बिना तपाईंको हस्ताक्षरको फोटो लिनुहोस्। तपाईं आफ्नो हस्ताक्षर को साथ स्क्रीन भर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो राम्रो देखिन्छ प्रयोग बटनमा हिट देखिन्छ र यसले तत्काल तपाईंको हस्ताक्षरको पृष्ठभूमिमा पारदर्शिता थप्नेछ र आयात गर्नुहोस् र जुन तपाईंले सुरुमा छनौट गर्नुभएको फोटोको शीर्षमा राख्नुहुनेछ। अब 'सम्पादन' मेनू आईटममा क्लिक गरेर तपाईं अस्पष्टता, कोण, सामान्य तरीकामा मापन परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईं बचत गर्नुहुन्छ, यसले तपाईंको हस्ताक्षरलाई वाटरमार्कको रूपमा बचत गर्दछ जुन तपाईं कुनै पनि समय प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले यसलाई केहि चोटी गर्न आवश्यक पर्दछ यो ठीक मात्र पाउनका लागि। महत्वपूर्ण: यसले त्यो फोटोलाई वाटरमार्क गर्दैन। यो फोटो वाटरमार्कको सिर्जनाको बेलामा पृष्ठभूमि मात्र हो। एकचोटि तपाईंले वाटरमार्क सिर्जना गरेर सुरक्षित गर्नुभयो भने तपाईं भविष्यमा कुनै पनि फोटोमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
हस्ताक्षर स्क्यान गर्नका साथै, स्क्यान हस्ताक्षरहरू सरल उच्च कन्ट्रास्ट ग्राफिक्स आयात गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तलको चित्रaको अंश हो फोटोग्राफर मार्क द्वारा ट्यूटोरियल अल्बेरस्की।
Your. तपाईको म्याकमा ग्राफिक्स सिर्जना गर्नुहोस् वा कम्प्युटर, विन, इ-मेलमा, त्यसपछि iWatermark मा खोल्नुहोस्।
तपाईंको कम्प्युटरमा फोटोशप, गिम्प वा धेरै ग्राफिक ईडिटरहरू मध्ये एक प्रयोग गरी ग्राफिक्स बनाउनुहोस्। यहाँ अल्फा मास्कको साथ ग्राफिक सिर्जना गर्न चरणहरूको रूपरेखा छ जसलाई पारदर्शिता पनि भनिन्छ।
a पारदर्शिताका साथ ग्राफिक सिर्जना गर्नुहोस्।
१) तह सिर्जना गर्नुहोस् र यसमा वाटरमार्क कोर्नुहोस् (वा केवल टाँस्नुहोस्)
२) म्याजिक वान्ड सबै पृष्ठभूमि जुन तपाईं पारदर्शी हुन चाहानुहुन्छ। त्यसो भए मेट्नुहोस्। तपाइँ चेकरबोर्ड पृष्ठभूमि संग छोडिनुभयो। यदि तपाईंले चेकरबोर्ड (कुनै पृष्ठभूमि छैन) देख्नु भएन भने त्यहाँ अरू लेयरहरू हुन सक्छन् तपाईलाई लुकाउन वा मेटाउन आवश्यक पर्दछ।
)) PNG को रूपमा बचत गर्नुहोस्। पारदर्शिता .jpg को साथ सिर्जना गर्न सकिदैन यो .png फाईल हुनुपर्दछ। यो लिङ्क यस बारेमा थप विवरण। यहाँ यो गर्नका लागि more तरीकाहरू छन्। अधिक जानकारी प्राप्त गर्न तपाईं पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ हस्ताक्षर सिर्जना गर्न गुगल पनि सक्नुहुनेछ।
b तपाईंको कम्प्युटरबाट ग्राफिक्स तपाईंको आईओएस वा एन्ड्रोइड उपकरणमा हस्तान्तरण गर्नुहोस्
तपाईंको कम्प्युटरबाट आफैलाई .png ईमेल गर्नुहोस्। तपाइँको आईफोन / आईप्याड वा एन्ड्रोइडमा खोल्नुहोस् र तपाइँ यस्तो केहि देख्नुहुनेछ।
तपाईंले पठाउनुभएको ग्राफिकमा टच गरेर होल्ड गर्नुहोस्। यस अवस्थामा यसको आईके आइकन। त्यो तलको संवाद पप अप गर्दछ। "क्यामेरा रोलमा बचत गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइड ग्राफिक्समा सीधा sdcard / iWatermark / वाटरमार्क फोल्डरमा पनि राख्न सकिन्छ र त्यसपछि iWatermark मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
c IWatermark मा आयात गर्नुहोस्
आईवटरमार्कमा स्क्रिनको तल सम्पादन मेनू छुनुहोस्। मेनूमा टच अप 'छवि' बटन (तल हेर्नुहोस्) तपाईंले क्यामेरा रोलमा बचत गर्नुभएको छवि फेला पार्नुहोस् र यो आयात हुनेछ र फोटोमा वाटरमार्कको रूपमा देखा पर्नेछ। तपाईं त्यसपछि यसको अस्पष्टता बदल्न चाहानुहुन्छ यसलाई अधिक दृश्यमान बनाउन।
आईके आइकन ग्राफिक तपाईंको हस्ताक्षर, लोगो वा अन्य ग्राफिक हुन सक्छ जुन तपाईंको व्यक्तिगत वाटरमार्क हो। एकचोटि तपाईंले आफ्नो ग्राफिक वाटरमार्क आयात गरेपछि तपाईं त्यसमा स्क्रिनको बायाँ / तल्लो छेउमा सम्पादन मेनूमा कुनै पनि आईटमहरूसँग कार्य गर्न सक्नुहुनेछ।
स्केल परिवर्तन गर्न सामान्य पिन्च वा फन्ट साइज विस्तार / अनुबंध गर्न जुम प्रयोग गर्नुहोस्।
QR वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्
QR कोड के हो? QR भनेको द्रुत प्रतिक्रिया र यसको एक प्रकारको बारकोड हो जसले धेरै जानकारी समात्न सक्छ। मा अधिक जान्नुहोस् विकिपीडिया। आईफोन / आईप्याडका लागि आईवाटरमार्कले तपाईंलाई क्यूआर कोडमा मितिका बहुविध लाइनहरू ईन्कोड गर्न अनुमति दिन्छ जुन वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आईफोनमा धेरै अनुप्रयोगहरूले QR कोडहरू डिकोड (स्क्यान र पढ्न) सक्छन्, एउटा आईफोन भनेको क्यामेरालाई क्यूआर कोडमा दर्साउँछ र यसले युआरएल देखाउँदछ र सोध्छ यदि तपाईं त्यो लिंकमा जान चाहानुहुन्छ भने। आईट्यून्स अनुप्रयोग स्टोरमा खोजी गर्नका लागि क्यूआर कोडहरू डिकोड गर्ने अनुप्रयोगहरू फेला पार्न 'QR कोड' टाइप गर्नुहोस्। एन्ड्रोइडसँग एक अनुप्रयोग छ जुन डिफल्ट अनुप्रयोगको रूपमा आउँदछ जुन QR कोडहरू पढ्छ जसलाई 'बारकोड स्क्यानर' भनिन्छ। यो राम्रो कुरा हो किनभने जब यो QR कोडमा URL भेट्दछ भने यसले ब्राउजर खोल्छ र तपाइँलाई सिधा साइटमा लैजान्छ।
वाटरमार्क राम्रोको रूपमा क्यूआर कोड के हो? अब, तपाईंको फोटोमा कुनै जानकारीको सट्टा तपाईंसँग तपाईं वा तपाईंको व्यवसायको बारेमा केही सटीक जानकारी हुन सक्छ जुन स्मार्टफोनमा उचित अनुप्रयोगले सजिलैसँग स्क्यान गर्न सक्दछ। वेबसाइटमा टाइप गर्न आवश्यक पर्दैन केवल स्क्यान गर्नुहोस् र यो त्यहाँ त्यसको ब्राउजरमा जान्छ। फोटोमा वाटरमार्कको रूपमा QR कोडले धेरै काम गर्न सक्दछ:
तपाईंको वेबसाइटमा लिंक गर्नुहोस्। तपाईंको वेबसाइटको URL इन्कोड गर्नुहोस् (उदाहरणको लागि https://plumamazing.com) तपाईंको फोटो वाटरमार्क। अनुप्रयोगहरू स्क्यान गर्न सक्दछ र त्यसपछि तपाईंको साइटमा सिधा जान्छ।
तपाईंको नाम, ठेगाना, ईमेल, वेबसाइट, इत्यादि राख्नुहोस्। त्यसैले मानिसहरूले जान्न सक्छन् कि यो तपाईंको सिर्जना, तपाईंको फोटो, तपाईंको बौद्धिक सम्पत्ती हो।
तिनीहरूले तपाईंलाई ईमेल गर्न, प्रतिक्रिया दिन वा सायद तपाईंको काम किन्न सक्छन्।
धेरै चीजहरू जुन हामीले सोचेका छैनौं :)
कसरी iWatermark मा एक QR कोड सिर्जना गर्ने।
'ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्' अनुसरण गर्नुहोस् (माथिको) बाँया साइड EDIT मेनूमा QR कोड छनौट गर्नुहोस् (माथिको स्क्रीनशट हेर्नुहोस्)। डाटा इन्टर गर्नुहोस् तपाईले ईन्कोड गर्न चाहानुहुन्छ। फेरी GENERATE बटनमा थिच्नुहोस्। यसले QR कोड सिर्जना र घुसाउँदछ। यसलाई उपयुक्त नामको साथ बचत गर्नुहोस्। अब कुनै पनि समय तपाई यस QR कोड को लागी एक फोटो वाटरमार्क गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईले QR कोड सिर्जना गर्नुभयो यसको परीक्षण गर्न यो राम्रो छ।
एक वाटरमार्क मेट्न पनि सरल छ। फोटो छान्नुहोस् वा एउटा लिनुहोस्।
आईफोन / आईप्याडका लागि - एउटा पाठ वाटरमार्क वा ग्राफिक वाटरमार्क गर्न बटन छनौट गर्नुहोस्। स्क्रिनको तल वाटरमार्क नेभिगेसन ट्याब छनौट गर्नुहोस् र रोलरमा पप अप हुन्छ वाटरमार्क चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं मेट्न चाहानुहुन्छ र रातो बटनमा यसमा थिच्नुहोस्।
एन्ड्रोइडका लागि - ग्राफिक वाटरमार्क गर्न बटन छनौट गर्नुहोस्। स्क्रिनको तल वाटरमार्क नेभिगेसन ट्याब छनौट गर्नुहोस् र रोलरमा पप अप हुन्छ वाटरमार्क चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं मेट्न चाहानुहुन्छ र रातो बटनमा यसमा थिच्नुहोस्।
सेभ र सेयर गर्नुहोस्
जब तपाईं छविमा वाटरमार्क पछि तल दायाँपट्टि बचत बटन हिट गर्नुहुन्छ माथि डायलग देखा पर्दछ। यहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ:
फोटो लाइब्रेरीमा बचत गर्नुहोस्।
पूर्ण गुण र आकारमा ईमेल गर्नुहोस्। (ईमेल मात्र उपलब्ध छ यदि तपाईंले आफ्नो आईओएस उपकरणमा बाहिर जाने ईमेल सेट अप गर्नुभयो भने)
केही कम गुणवत्ता र सानो आकारमा ईमेल गर्नुहोस्।
कम क्वाटी र अझै सानो आकारमा ईमेल जुन अझै वेबमा राम्रो देखिन्छ।
तपाइँको मा अपलोड गर्नुहोस् फेसबुक खाता।
अपलोड गर्नुहोस् twitter
फोटो वा बहु फोटो चयन गर्नुहोस्
फोटोहरूमा पहुँच खोल्नु पर्छ। यो यसमा छ भनेर निश्चित गर्नका लागि:
आईओएस the सेटिंग्स मा जानुहोस्: गोपनीयता: फोटोहरु र फोटोहरु को उपयोग गर्न स्विच राख।
आईओएस the सेटिंग्स मा जानुहोस्: गोपनीयता: स्थान सेवाहरू: र यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि iWatermark सकृय छ। हामी स्थान डाटा प्रयोग गर्दैनौं तर काम गर्न बहु चयनका लागि यसलाई खोल्न आवश्यक पर्दछ।
ब्याच वाटरमार्किंग फोटोहरू
माथीको स्क्रीनशटमा सुरू गर्नका लागि एउटा तस्विर अधिक छनौट गर्नुहोस्। मुख्य 'स्क्रीन' मा 'भयो' बटन थिच्नुहोस् वाटरमार्क बटन छनौट गर्नुहोस् र तपाईंको वा हाम्रो वाटरमार्क मध्ये एक छान्नुहोस्। तपाईंले सेयर गरेपछि (एल्बमहरू वा फेसबुकमा बचत गर्नुहोस्) यसैले प्रत्येक फोटोको तर्फबाट जान्छ र जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ बचत गर्न सक्नुहुन्छ (एल्बम, फ्लिकर, फेसबुक, आदि)।
वाटरमार्कहरू अवस्थित गर्दै
प्रत्येक फोटोको लागि उही स्थानमा वाटरमार्कहरू पिन गर्न स्थिति बटन प्रयोग गर्नुहोस्। पाठ वा ग्राफिक वाटरमार्कमा स्थिति बटन क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं माथि डायलग पाउनुहुनेछ। क्षैतिज स्थान र ठाडो स्थान छनौट गर्नुहोस् (बाँया, शीर्ष जस्तै) प्रत्येक ठाउँमा उही ठाउँमा वाटरमार्क राख्न प्रत्येक पटक व्यक्तिगत फोटो वा ब्याच फोटोहरूका लागि।
स्थिति उपकरण विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईंसँग ब्याच प्रक्रियाको लागि धेरै फोटोहरू छन्, जुन विभिन्न अभिमुखिकरणहरू (चित्र वा ल्यान्डस्केप) वा फरक रिजोल्युसन हुन् र तपाईं वाटरमार्क प्रत्येकमा समान ठाउँमा देखिन चाहनुहुन्छ।
Q: IWatermark नि: शुल्क र iWatermark दुबै आईफोन / आईप्याडका बीच के भिन्नता छ?
A: दुई बीचको भिन्नता केवल यो हो कि iWatermark नि: शुल्क एउटा सानो वाटरमार्क राख्दछ जसले भन्छ कि 'iWatermark निःशुल्क - यस वाटरमार्क हटाउन अपग्रेड' चित्रको तल। नि: शुल्क संस्करणमा नियमित संस्करणमा स्तरवृद्धि गर्न बटन मुख्य पृष्ठमा छ। धेरैलाई त्यो पर्याप्त लाग्नेछ। अन्यथा त्यो वाटरमार्क हटाउन अपग्रेड गर्नुहोस्। अपग्रेडिंगले iWatermark को विकासलाई समर्थन गर्दछ, यो यस्तो परिष्कृत प्रोग्रामको लागि सानो मूल्य हो।
Q: आईओटेरमार्क आईओएस र एन्ड्रोइडमा के भिन्नता छ?
A: धेरै होइन त्यसैले हामी समान म्यानुअल प्रयोग गर्दछौं। एन्ड्रोइड संस्करणले फाईलहरू बिभिन्न ठाउँमा बचत गर्दछ। उत्तर अर्को प्रश्नोत्तर मा छ।
Q: मैले बचत गरे किन मैले मेरो वाटरमार्क गरिएको फोटो फेला पार्न सके?
A: यी २ फरक वस्तुहरू छन् (१) वाटरमार्क वा (२) वाटरमार्क फोटो। एक अर्कोको लागि भ्रमित नगर्नुहोस्।
१. फोटो खोल्नुहोस्, एउटा पाठ वा ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस् त्यसपछि मात्र वाटरमार्क बचत गर्नुहोस्।
२. फोटो खोल्नुहोस्, बचत गरिएको वाटरमार्क थप्नुहोस्, फोटो वाटरमार्क गर्नुहोस् र त्यो वाटरमार्क फोटो बचत गर्नुहोस्।
जब तपाईंले १ (माथिको) गर्नुभयो तपाईं अलमल्लमा पर्नुहुनेछ किनकि जब तपाईं वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहुन्छ तपाईं फोटोमा वाटरमार्क कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि पहिले फोटो लोड गर्नुहुन्छ। जब तपाईं यो बचत गर्नुहुन्छ तपाईं वाटरमार्क बचत गर्नुहुन्छ तपाईंले भर्खर फोटो बनाउनु भएन। वाटरमार्क क्यामेरा रोलमा बचत गरिएको छ जहाँ कुनै पनि समय पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ।
१ ले तपाईंलाई फरक वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन तपाईं पछि कुनै पनि समयमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क फोटोहरूमा सजिलैसँग।
२ वास्तवमा वाटरमार्किंग र वाटरमार्क फोटोको बचत हो।
Q: एन्ड्रोइड संस्करणले कहाँ फाइलहरू बचत गर्दछ?
A: जब तपाइँ पहिलो पटक एन्ड्रोइड संस्करण सुरू गर्नुहुन्छ यसले एक संवाद राख्दछ जुन भन्छ, "सहयोगी टिप: यस अनुप्रयोग प्रयोग गरेर वाटरमार्क गरिएका तस्बिरहरू तपाइँको बाह्य भण्डारणमा 'iWatermarked छविहरू' चिन्ह लगाइएको फोल्डर भित्र बचत हुन्छ। तपाईं ती फाईल ब्राउजर अनुप्रयोग वा थ्रु ग्यालेरी प्रयोग गरेर पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
Q: आईफोन / आईप्याडका लागि आईवटरमार्क र म्याक / विनको लागि डेस्कटप संस्करणहरूमा के भिन्नता हुन्छ?
A: डेस्कटप संस्करणहरूले छिटो प्रोसेसर र ठूलो प्रदर्शनको फाइदा लिन्छ। डेस्कटप संस्करणहरूसँग अधिक क्षमताहरू छन्, फोटोहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछ जुन धेरै ठूलो हुन्छ र सयौं वा हजारौं फोटोहरूमा फोटोग्राफर कार्यप्रवाहमा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। आईफोन / आईप्याड संस्करण तपाईलाई विभिन्न प्यारामिटरहरू परिवर्तन गर्न टच प्रयोग गर्न अनुमति दिन डिजाइन गरिएको हो। दुबै आफ्नो हार्डवेयर फिट डिजाइन गरिएको छ। थप पत्ता लगाउन यहाँ जानुहोस् iWatermark प्रो म्याकको लागि र iWatermark Win का लागि. समाचार प्राप्त गर्न हामीलाई फेसबुकमा र म्याक वा विन संस्करणको लागि विशेष छुट कुपनको रूपमा मनपराउनुहोस्।
Q: मैले फोटो, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टम्ब्लर, इत्यादिमा राखेका तस्बिरहरू किन वाटरमार्क गर्ने?
A: उत्कृष्ट प्रश्न! किनकि ती सबै सेवाहरूले तपाईंको मेटाडाटा हटाउँदछन् र तपाईंसँग त्यो फोटो बाँध्न केही पनि छैन। व्यक्तिहरू केवल तपाईंको तस्विरहरू उनीहरूको डेस्कटपमा तान्न र अन्यमा साझेदारी गर्न सक्दछन जबसम्म तपाईंसँग कुनै सम्पर्क हुँदैन र फाइलमा कुनै जानकारी छैन जुन तपाईंले भन्नुभएको हो कि तपाईंले सिर्जना गर्नुभयो वा स्वामित्व पाउनुभयो। वाटरमार्कले सुनिश्चित गर्दछ कि सबैजना तथ्यमा स्पष्ट छन् कि फोटो तपाईको आईपी (बौद्धिक सम्पत्ती) हो। तपाईले कहिले थाहा पाउनु भएन कि तपाईले लिनु भएको फोटो कहिले भाईरल हुन्छ। तयार होउ।
Q: के iWatermark प्रो फोटो एलबम को उच्चतम रिजोलुसन मा एक फोटो बचत गर्दछ?
A: हो, आईफोनका लागि आईवटरमार्क फोटो एल्बमको उच्चतम रिजोलुसनमा बचत गर्दछ। तपाइँको प्रदर्शन सुधार गर्न को लागी एक कम रिजोलुसन देखाउन सक्छ तर अन्तिम आउटपुट इनपुट बराबर हुन्छ। तपाई उच्च रिजोलुसन सहितको रिजोलुसनको विकल्पमा सिधा अनुप्रयोगबाट वाटरमार्क गरिएका तस्बिरहरूलाई पनि ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ। यो हुन सक्छ कि यदि तपाईं आफैं फोटो एल्बमबाट ईमेल खोज्दै हुनुहुन्छ र तपाईं g जीमा हुनुहुन्छ (वाइफाइ होइन) एप्पलले फोटोहरूको रिजोल्युसन कम गर्न छनौट गरिरहेको छ। यसको आई-वाटरमार्कसँग कुनै सरोकार छैन। यसको एप्पल, एटीटी र band जी ब्यान्डविथ अधिकतम बनाएर छनौटहरूको साथ गर्न केहि गर्न सक्दछ।
Q: म कसरी म्याक संस्करणमा आईफोन / आईप्याड वा आईवटरमार्कको एन्ड्रोइड संस्करणबाट फन्टहरू प्रयोग गर्ने?
A: आईवटरमार्क आईफोन अनुप्रयोगबाट फन्टहरू प्राप्त गर्न तपाईंले आईफोन अनुप्रयोग म्याकमा कहां भण्डार गरिएको छ भन्ने पत्ता लगाउन आवश्यक छ।
आईट्यून्समा, अनुप्रयोगहरू फलकमा, नियन्त्रण + एक अनुप्रयोग क्लिक गर्नुहोस्, र "फाइन्डरमा देखाउनुहोस्" छनौट गर्नुहोस्।
यसले यहाँ अवस्थित फाईल प्रकट गर्दछ:
म्याकोन्टोश एचडी> प्रयोगकर्ताहरू * * उपयोगकर्ता नाम *> संगीत> आईट्यून्स> मोबाइल अनुप्रयोगहरू
र iWatermark.ipa भनिने फाइललाई हाइलाइट गर्दछ जब म्याकमा हस्तान्तरण हुन्छ वा विन iWatermark अनुप्रयोग हो।
यस फाईलको प्रतिलिपि गर्नुहोस्। विकल्प कुञ्जी र त्यहाँ प्रतिलिपि गर्न यस फाईललाई डेस्कटपमा तान्नुहोस्। अब यो मूल फोल्डरमा हुनुपर्दछ र तपाइँको डेस्कटपमा एक प्रतिलिपि हुनुपर्दछ।
.Zip मा डेस्कटप व्यक्तिको विस्तारको नाम परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसैले यसलाई अब iWatermark.zip नामकरण गर्नुपर्दछ
अनस्टफ गर्न डबल क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईंसँग एक फोल्डर छ, भित्र यी आईटमहरू छन्:
पेलोड फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि iWatermark फाईलमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं माथि ड्रपडाउन मेनू पाउनुहुनेछ।
'प्याकेज सामग्री देखाउनुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ भित्र तपाईंले सबै फन्टहरू फेला पार्नुहुनेछ।
फन्टमा डबल क्लिक गर्नुहोस् यसलाई म्याकमा स्थापना गर्नका लागि।
Q: मैले दुर्घटनामा 'iWatermark फोटोमा पहुँच अनुमति नदिनुहोस्' छनौट गर्दछु। म iWatermark को लागी कसरी सक्षम गर्ने?
A: सेटि toहरूमा जानुहोस्: गोपनीयता: फोटोहरू र iWatermark को लागी स्विच खोल्नुहोस्।
Q: म कसरी वाटरमार्क सार्न सक्छु?
A: वाटरमार्कलाई सार्नको लागि केवल यसलाई आफ्नो औंलाले छुनुहोस् र जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ ड्र्याग गर्नुहोस्। तपाईं फन्ट साइज, स्केल (पिन्च / जुम प्रयोग गरेर) र कोण परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ (दुई औंला मोड) सिधा स्पर्श गरी।
Q: के iWatermark सक्कली फोटोबाट EXIF ​​जानकारीमा पास गर्दछ?
A: हो, कुनै पनि वाटरमार्क गरिएको फोटो जुन तपाईं फोटो एल्बममा बचत गर्नुहुन्छ वा ईमेल मार्फत पठाउँछन् त्यसमा GPS जानकारी सहित सबै मौलिक EXIF ​​जानकारी हुन्छ।
Q: मैले के गरेको छु मलाई क्र्यास भएको थियो।
A: यो दुर्लभ तर क्र्यास reasons कारणले हुन सक्छ र त्यहाँ सजिलो समाधानहरू छन्।
१. खराब अनुप्रयोगले तपाईको आईफोन / आईप्याड र आईट्यून्स वा एन्ड्रोइड उपकरणमा संस्करण पुनः मेटाउन आवश्यक पर्दछ।
२. एसएलआरबाट फोटोहरू प्रयोग गरेर जुन १० मेग वा सो भन्दा माथि छ। आईवटरमार्क आईफोन र आईप्याड फोटोहरूका लागि डिजाइन गरिएको थियो। यो अन्य ठूला फोटोहरूमा काम गर्दछ तर Android र iOS उपकरणहरूमा मेमोरीको सीमितता दिमागमा राख्छ।
Some. फोन ओएसको साथ केहि भइरहेको छ। फोनलाई यसको पूर्वनिर्धारित अवस्थामा फिर्ता राख्न पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्।
Enough. उपकरणमा पर्याप्त मेमोरी बाँकी छैन। समाधान केवल पोडकास्ट, भिडियो वा अन्य अस्थायी सामग्री मेटाउन छ।
तपाईले माथिको जाँच गरेर गर्नुभयो र लगातार बग गरेपछि कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोस् विवरणहरू पुनरुत्पादित गर्न र यदि हामी यसलाई पुन: उत्पादन गर्न सक्दछौं भने हामी यसलाई ठीक गर्न सक्छौं।
Q: म मेरो फोटोहरू को लागी देखी वाटरमार्क को रूप मा मेरो हस्ताक्षर को उपयोग गर्न चाहान्छु। पिकासो, बेन फ्रान्कलीन, आदि द्वारा उदाहरण हस्ताक्षरहरू जस्तो म कसरी ग्राफिक्स थप्ने?
A: त्यहाँ २ तरिकाहरू छन्:
स्क्यान सिग्नेचरमा बनेको प्रयोग गर्नुहोस् जुन सम्पादन मेनूमा छ जब तपाईं क्लिक गर्नुहोस् ग्राफिक वाटरमार्क।
तपाईंको कम्प्युटरमा ग्राफिक्स बनाउनुहोस् र आफैंमा फाइल ईमेल गर्नुहोस्, फोटो लाइब्रेरीमा संलग्न फाइल बचत गर्नुहोस्। त्यहाँ यो iPhones फोटो पुस्तकालय मा हुनेछ जहाँ तपाईं यसलाई iWatermark भित्रबाट पाउन सक्नुहुनेछ तपाईंको फोटोहरूमा वाटरमार्क गर्न।
यहाँ ती चरणहरूको रूपरेखा छ:
यस प्रकारको फोटोशपमा पारदर्शिता सिर्जना गर्नु आवश्यक छ:
१) तह सिर्जना गर्नुहोस् र यसमा वाटरमार्क कोर्नुहोस् (वा साधारण पेस्ट)
२) म्याजिक जादू गरी सबै ग्वाइन्ट, र त्यसपछि हिट मेट्नुहोस्। तपाईको चेकरबोर्ड पृष्ठभूमिमा बाँकी छ
)) पृष्ठभूमि तह लुकाउनुहोस्
)) PNG को रूपमा बचत गर्नुहोस्। पारदर्शिता .jpg को साथ सिर्जना गर्न सकिदैन यो .png फाईल हुनुपर्दछ।
प्रक्रियामा थप विवरण तल छन्।
वाटरमार्कको रूपमा कुनै ग्राफिक प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको आफ्नै हस्ताक्षर प्रयोग गर्न, पहिले तपाईंले आफ्नो हस्ताक्षर स्क्यान गर्नु पर्छ र त्यसपछि पृष्ठभूमि हटाउनु पर्छ। यदि तपाईंसँग सेतो पृष्ठभूमि भएको हस्ताक्षर छ भने यसले तपाईंको फोटोको केही भाग अस्पष्ट पार्छ, हस्ताक्षर वाटरमार्क सेतो खण्ड जस्तो देखिनेछ। त्यसो नभएको निश्चित गर्न तपाईंको स्क्यान गरिएको हस्ताक्षरलाई फोटोशप (वा केही अन्य ग्राफिक्स सम्पादक जस्तै) ग्राफिक सम्पादकमा राख्नुहोस्। गिम्प GenericName जुन नि: शुल्क छ) तपाईंको हस्ताक्षर खोल्नुहोस्, जादू उपकरणको साथ सेतो पृष्ठभूमि हटाउनुहोस् र फाइललाई .png फाईलको रूपमा बचत गर्नुहोस्। यो आवश्यक छ कि फाईल .png फाईल हो किनकि jpg फाईल पारदर्शी पृष्ठभूमिमा अनुमति दिदैन।
यो लिङ्क तपाईंलाई यो गर्न चरणहरू दिन्छ। यहाँ यो गर्नका लागि more तरीकाहरू छन्। अधिक जानकारी प्राप्त गर्न तपाईं पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ हस्ताक्षर सिर्जना गर्न गुगल पनि सक्नुहुनेछ।
तपाईको आईफोन / आईप्याडमा सजिलो तरीकाले स्थानान्तरण गर्नका लागि फाइल आफैंमा ईमेल गर्नु हो, ईमेल खोल्नुहोस् र त्यसपछि फाइललाई फोटो लाइब्रेरीमा बचत गर्नुहोस्। त्यहाँ आईफोनमा फोटो लाइब्रेरीमा ग्राफिक्स स्थानान्तरण गर्न अन्य तरिकाहरू र उपकरणहरू छन्। एन्ड्रोइडमा तपाईं फोन भण्डारणमा png ग्राफिक्स प्रत्यक्ष बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसो भए आई-वाटरमार्कमा तपाईं ग्राफिक वाटरमार्क बनाउनुहुन्छ र तपाईंको हस्ताक्षर छवि प्रयोग गर्नुहुन्छ (आईफोन फोटो लिबाराबाट) र तपाईंको नाम दिनुहोस्। तपाईं यी मध्ये धेरै फरक रिजोलुसन, रोटेशन, ओप्यासिटी, आदि मा पाउन सक्नुहुन्छ र प्रत्येकलाई यसलाई पहिचान गर्न नाम दिनुहोस्।
Q: फोटो स्ट्रिमले कसरी काम गर्दछ? के म क्यामेरा रोलको सट्टा फोटो स्ट्रिममा फोटो थप्छु?
A: यो हामी द्वारा एप्पल द्वारा नियन्त्रित छ। अधिक जानकारी यहाँ छ.
Q: म कसरी प्रदान गर्ने उदाहरण हस्ताक्षर र लोगो मेटाउने?
A: फोटो चयन गर्नुहोस् (पृष्ठभूमिको रूपमा कार्य गर्न) त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्। वाटरमार्कमा अर्को क्लिक र रोलर पप अप हुनेछ। रातो क्लिक गर्नुहोस् - त्यो उदाहरण मेटाउनको लागि।
Q: मैले मेरो फोन हराएँ र आईफोन / आईप्याड (वा एन्ड्रोइड) संस्करण पुन: डाउनलोड गर्नु पर्छ। के मैले फेरि तिर्नु पर्छ?
Aहोईन। दुबै एप्पल आईट्यून्स स्टोर र गुगल प्ले तपाईंले पहिले नै खरिद गर्नुभएको अनुप्रयोगहरू redownload गर्न दिनुहोस् र तिनीहरूको नीतिहरू ती लिंकहरूमा छन्।
Q: म्याक वा विन्डोज को लागी iWatermark को संस्करण छ?
A: हो, ती हाम्रो साइटमा उपलब्ध छन् यहाँ। तिनीहरू धेरै शक्तिशाली छन् विशेष गरी म्याकको लागि नयाँ iWatermark प्रो। यसले एकै साथ धेरै वटरमार्कहरूलाई अनुमति दिन्छ, समानान्तर प्रशोधन (FAST) प्रयोग गर्दछ र अधिक प्रभावहरू र लचिलोपन गर्दछ। फोटोग्राफरहरूको लागि महान।
Q: यदि म आईप्याड र आईफोन दुबैको लागि आईवटरमार्क प्रयोग गर्न चाहान्छु, के मैले दुई अनुप्रयोगहरू वा केवल एउटाको लागि तिर्नु पर्छ?
A: केहि अनुप्रयोग निर्माताहरू तपाइँले दुई पटक भुक्तान गर्न चाहन्छन्। हामी गर्दैनौं। समान iWatermark आईफोन र आईप्याड मा ठीक काम गर्दछ। कानूनी रूपमा तपाईं दुबै को मालिक हुनुहुन्छ र तपाईं दुबै मा आफ्नो सफ्टवेयर हुन सक्छ। तर कृपया तपाईका साथीहरूलाई एक किन्नको लागि प्राप्त गर्नुहोस् वा राम्रो आईट्युन्स अनुप्रयोग स्टोरमा star तारा समीक्षा राख्नुहोस् यसको मात्रै। and5 र सेबले त्यसको एक तिहाई पाउँदछ। ती दुबैले हामीलाई विकसित, प्रोग्रामिंग र अनुप्रयोग सुधार गर्न मद्दत गर्छन्।
महत्वपूर्ण: जोन ह्यान्कक, बेन फ्रान्कलीन, गलीलियोका हस्ताक्षरहरू केवल ग्राफिक वाटरमार्कका उदाहरण हुन्। तिनीहरू यी व्यक्तिहरूको प्रामाणिक हस्ताक्षर हुन्। प्रत्येक स्क्यान गरिएको थियो, डिजिटलाइज गरिएको, पृष्ठभूमि हटाईएको र .png फाईलको रूपमा सुरक्षित गरियो। मनोरन्जनको लागि र के सम्भव छ देखाउनको लागि समावेश गरिएको छ। हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं आफ्नै हस्ताक्षर बनाउनुहोस् वा तपाईंको फोटोहरूको लागि लोगो प्रयोग गर्नुहोस्। तपाइँको आफ्नो हस्ताक्षर वा लोगो iWatermark मा कसरी सिर्जना गर्ने र राख्ने भन्ने बारे माथिको प्रश्नोत्तर मा हेर्नुहोस्। यदि तपाईं आफ्नै ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्न चाहनुहुन्न भने जहिले पनि तपाईंलाई आवश्यक पर्ने टेक्स्ट वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
कृपया हामीलाई तपाईंको सुझावहरू, बगहरू पठाउनुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस् तपाईंलाई यो कस्तो लाग्छ यहाँ। हामीलाई राम्रो उद्धरण र तपाईंको साइटको लिंक ईमेल गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग वाटरमार्कको साथ एक महान फोटो छ भने यसलाई पठाउन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। हामी तपाइँबाट सुन्न रमाईलो गर्दछौं।
हामीलाई मन पराउनुहोस्
हामीसँग फेसबुकमा सामेल हुनुहोस् र आईवटरमार्कको म्याक वा विन्डोज संस्करणको लागि समाचार र छुट कुपन प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईंको डेस्कटप तपाईको आईफोन वा एन्ड्रोइड संस्करणको साथ संयोजनको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
iWatermark यस मा एक5सितारा समीक्षा मिल्यो भियतनामी डाउनलोड र समीक्षा साइट
एक धेरै नै राम्रो सिंहावलोकन स्क्रीनकास्ट iWatermark र iWatermark + तबिता कैरो द्वारा
यो स्क्रिनकास्ट भिडियो फिलिस करेबाट हो
माकुरो कामबाट स्क्रिनकास्ट
क्याथरिन राउसोपौलोसले यस जानकारीपूर्ण स्क्रिनकास्ट बनाई।
प्लम आश्चर्यजनक आवश्यक आईओएस, विन्डोज, एन्ड्रोइड र म्याक अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न समर्पित छ।
प्लम अमेजिंगले विगत शताब्दीदेखि नै संसारभरिका अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्यो। यस plumamasing.com साइट मार्फत म्याक र विन सफ्टवेयर सिर्जना र बिक्री गर्दै। हाम्रो एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू गुगल प्लेमा चित्रित छन्। एप्पलको एप्प स्टोरले हाम्रो आईओएस र केही म्याक अनुप्रयोगहरू प्रस्तुत गर्दछ।
हामी कम्पनीहरू र ग्राहकहरूको लागि अनुप्रयोग विकास पनि गर्छौं। हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
समाचार र अधिक (विरलै)
© २०१ PL प्लम आश्चर्यजनक सबै अधिकारहरू सुरक्षित
कानूनी | गोपनीयता
× उत्पादन (हरू) गाडी थपियो → ×
हामी तपाईंको प्रतिक्रियालाई कदर गर्दछौं
हामी सकेसम्म चाँडो जवाफ दिनेछौं
बेर आश्चर्यजनक, LLC